Services - Unique Colors Co., Ltd.
Unique Colors Co., Ltd.
နညျးပညာခတျေကွီးထဲမှာ ကှနျပြူအသုံးပွုခွငျးဟာ မဖွဈမနေ လိုအပျလာသောအရာ တခုဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ 24 Hours Services ပေးနတဲ့အတှကျ လူကွီးမငျးတို့ ပိုမိုအဆငျပွနေိုငျပါတယျ။
ထို့ကွောငျ့ မိမိအသုံးပွုနသေော ကှနျပြူတာနှငျ့ပတျသကျသော Error ၊Network and Internet Connection Error ဖွဈစေ အခကျအခဲ တစုံတရာဖွဈခဲ့ပါက #Unique Colors IT Services ကိုသတိရဆကျသှယျလိုကျပါ။
Offical အသုံးပွုလိုသူမြားအတှကျလညျး Window, Office , Anti-Virus Licences မြားကိုလညျး
Gamer မြား၊ Computer အသဈ ဝယျလိုသူမြားအတှကလညျး အထူးဝနျဆောငျမူမြား ပေးလြှကျရှိပါတယျ။
လူကွီးမငျးတို့ Pc မြား upgrade ပွုလုပျခွငျး၊ Pc အသဈတပျဆငျခွငျးမြားကို ခနျ့မှနျးထားသော ငှပေမာဏနဲ့ pc ကို လူကွီးမငျးတို့အဓိကအသုံးပွုမညျ့အနအေထားအတိုငျး အသငျ့တျောဆုံးဖွဈအောငျ တပျဆငျ ရောငျးခြ ပေးနပေါတယျ။
ဂိမျးဆိုငျဖှငျ့ရနျဆန်ဒရှိသူမြားအနဖွေငျ့လဲ Unique Colors IT Solution မှ ဆိုငျအတှကျ အတှအေ့ကွုံကောငျးမြားဖွငျ့ solution service မြားပေးနပေါပွီ။
ဖုနျးဖွငျ့ဖွဈစေ၊ လူကိုယျတိုငျ လာရောကျဝနျဆောငျမှု့ပေးခွငျးဖွငျ့ဖွဈစေ နခေ့ငျြးပွီးအောငျ လူကွီးမငျးတို့၏ ရုံးခနျး၊ စကျရုံ မြားသို့ လာရောကျဝနျဆောငျမှု့ပေးလြှကျရှိပါသညျ။
Windows & Software installation (Mac and Window)
Anti-Virus scanning and Anti-Virus definition Update
Network & internet Connection Services
Data Sharing/Printer Sharing
?Networking Services (Server)?
Wireless Internet & hotspot
Router, Switch, Firewall and Other Network Device
? CCTV Service?
လူကွီးမငျးတို့၏ အိမျ၊ ရုံးခနျး၊ စကျရုံမြားတှငျ CCTV တပျဆငျလိုခွငျး၊ ၎င်းငျး CCTV အား အငျတာနကျအသုံးပွု၍ အဝေးတနရောမှ Mobile View ကွညျ့ရှု့လိုခွငျးမြားကို စိတျတိုငျးကြ ဆောငျရှကျပေးနပေါသညျ။
လူကွီးမငျးတို့၏ အိမျ၊ ရုံးခနျး၊ စကျရုံမြားတှငျ Cambium Network , EnGenius , TP-Link အစရှိသော Device မြားဖွငျ့ စိတျတိုငျးကြ ဆောငျရှကျပေးနပေါသညျ။
?? Regular Maintenance??
လူကွီးမငျးတို့၏ ကှနျပြူတာနှငျ့ Network မြားကို ပုံမှနျပွုပွငျထိနျးသိမျးရနျ အတှကျ ဈေးနှုနျးသငျ့တငျ့ပွီး စိတျခမြွနျဆနျစှာဆောငျရှကျပေးနသေော #Uniuqe Colors IT Services မှ လစဉျ၊ နှဈစဉျ Contract ခြုပျထားလိုကျခွငျးဖွငျ့ လူကွီးမငျးတို့၏ အိမျ၊ ရုံးခနျး၊ စကျရုံမြားကို အပတျစဉျ ပုံမှနျလာရောကျ ဆောငျရှကျပေးနပေါသညျ။
? ကှနျပြူတာ(၁၀)လုံးနှငျ့အထကျ (Plan-A)?
(၁)လ၊ (၁)ကွိမျဝနျဆောငျမှု့အတှကျ စကျတဈလုံးလြှငျ (5000)ကပျြ။
(၁)လ၊ (၂)ကွိမျဝနျဆောငျမှု့အတှကျ စကျတဈလုံး လြှငျ (8000)ကပျြ။
?ကှနျပြူတာ (၅)လုံး (Plan-B)?
(၁)လ၊ (၂)ကွိမျ ဝနျဆောငျခ စကျတဈလုံးလြှငျ (10,000)ကပျြ။
?‍♂️For On Call Service (Plan-C)?‍♂️
One PC (20,000 Ks) + Transportation
?( ICT နှငျ့ပတျသတျသော ပွုလုပျလိုသညျ့ လုပျငနျးမြားအတှကျ အကွံပေးမေးမွနျးနိုငျပါသညျ)?
☎️ဆကျသှယျရနျ #Unique Colors IT Solution
☎️Ph – 09-421086853 ,09-790224366 (24/7)
Facebook Page – https://www.facebook.com/ucitsolution/
နည်းပညာခေတ်ကြီးထဲမှာ ကွန်ပျူအသုံးပြုခြင်းဟာ မဖြစ်မနေ လိုအပ်လာသောအရာ တခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ 24 Hours Services ပေးနတဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် မိမိအသုံးပြုနေသော ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်သော Error ၊Network and Internet Connection Error ဖြစ်စေ အခက်အခဲ တစုံတရာဖြစ်ခဲ့ပါက #Unique Colors IT Services ကိုသတိရဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Offical အသုံးပြုလိုသူများအတွက်လည်း Window, Office , Anti-Virus Licences များကိုလည်း
Gamer များ၊ Computer အသစ် ၀ယ်လိုသူများအတွကလည်း အထူးဝန်ဆောင်မူများ ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ Pc များ upgrade ပြုလုပ်ခြင်း၊ Pc အသစ်တပ်ဆင်ခြင်းများကို ခန့်မှန်းထားသော ငွေပမာဏနဲ့ pc ကို လူကြီးမင်းတို့အဓိကအသုံးပြုမည့်အနေအထားအတိုင်း အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်အောင် တပ်ဆင် ရောင်းချ ပေးနေပါတယ်။
ဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်ရန်ဆန္ဒရှိသူများအနေဖြင့်လဲ Unique Colors IT Solution မှ ဆိုင်အတွက် အတွေ့အကြုံကောင်းများဖြင့် solution service များပေးနေပါပြီ။
ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ဝန်ဆောင်မှု့ပေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ နေ့ချင်းပြီးအောင် လူကြီးမင်းတို့၏ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံ များသို့ လာရောက်ဝန်ဆောင်မှု့ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ်၊ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံများတွင် CCTV တပ်ဆင်လိုခြင်း၊ ၄င်း CCTV အား အင်တာနက်အသုံးပြု၍ အဝေးတနေရာမှ Mobile View ကြည့်ရှု့လိုခြင်းများကို စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ်၊ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံများတွင် Cambium Network , EnGenius , TP-Link အစရှိသော Device များဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ ကွန်ပျူတာနှင့် Network များကို ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး စိတ်ချမြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်ပေးနေသော #Uniuqe Colors IT Services မှ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် Contract ချုပ်ထားလိုက်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ်၊ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံများကို အပတ်စဉ် ပုံမှန်လာရောက် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
? ကွန်ပျူတာ(၁၀)လုံးနှင့်အထက် (Plan-A)?
(၁)လ၊ (၁)ကြိမ်ဝန်ဆောင်မှု့အတွက် စက်တစ်လုံးလျှင် (5000)ကျပ်။
(၁)လ၊ (၂)ကြိမ်ဝန်ဆောင်မှု့အတွက် စက်တစ်လုံး လျှင် (8000)ကျပ်။
?ကွန်ပျူတာ (၅)လုံး (Plan-B)?
(၁)လ၊ (၂)ကြိမ် ဝန်ဆောင်ခ စက်တစ်လုံးလျှင် (10,000)ကျပ်။
?( ICT နှင့်ပတ်သတ်သော ပြုလုပ်လိုသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် အကြံပေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်)?
☎️ဆက်သွယ်ရန် #Unique Colors IT Solution